घट्यो बिदेशी मुद्राको भाऊ, कुन देशको कति? (सूचीसहित) - Everest Dainik - News from Nepal
घट्यो बिदेशी मुद्राको भाऊ, कुन देशको कति? (सूचीसहित)
२०७६, १७ आश्विन शुक्रबार
काठमाडौंः नेपाली बजारमा साताको छैठौं दिन शुक्रबार अमेरिकी डलरसहित प्रायः सबै देशको भाऊ घटेको छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले तोकेको विनिमय दर अनुसार आज अमेरिकी डलर एकको खरिददर ११३ रुपैयाँ १२ पैसा रहेको छ भने बिक्रिदर ११३ रुपैयाँ ७२ पैसा रहेको छ ।
याे पनि पढ्नुस विदेशी मुद्राको आजको विनिमयदर, कुन देशको कति? (सूचीसहित)
त्यस्तै युके पाउण्डको भने भाऊ बढेको छ। युके पाउण्ड स्ट्रलिङ एकको खरिददर १३९ रुपैयाँ ३२ पैसा र बिक्रिदर १४० रुपैयाँ ०६ पैसा रहेको छ । यूएई दिराम एकको खरिद दर ३० रुपैयाँ ८० पैसा रहेको छ भने बिक्रि दर ३० रुपैयाँ ९६ पैसा रहेको छ ।
साउदी रियाल एकको खरिददर ३० रुपैयाँ १६ पैसा रहेको छ भने बिक्रिदर ३० रुपैयाँ ३२ पैसा रहेको छ । त्यस्तै कतारी रियाल एकको खरिददर ३१ रुपैयाँ ०७ पैसा रहेको छ भने बिक्रिदर ३१ रुपैयाँ २३ पैसा रहेको छ ।
ट्याग्स: अमेरिकी डलर, बिदेशी मुद्रा